Dhabar xanuunka hoose waa raaxo guud oo hooyooyinka uurka leh. Intaas waxaa sii dheer, kala-goysyada 'sacroiliac', oo ah halka yar ee dhabarka iyo badhidu ay ku biiraan, waa aag kale oo xanuunku ku badan yahay. Markaad uur leedahay, isbeddelada jir ahaaneed waxay culeys saaraan lafdhabartaada, xirmooyinka ku xiran lafdhabartaada iyo miskaha, iyo muruqyada ku hareeraysan ee ku siiya lafdhabartaada taageero iyo dabacsanaan. Gaar ahaan, waxaa jira seddex arrimood oo gacan ka geysta raaxo la'aanta:
Ballaarinta miskahaaga iyo caloosha, iyo culeyska oo kordhay.
Is-fidinta, khafiifinta iyo daciifinta murqaha caloosha.
Koritaanka ilmaha oo jiidaya iyo muruqyada jilbaha isku xiraya lafdhabarta.
Xilliga uurka, jirkaaga wuxuu sii daayaa hormoonka nasashada, kaasoo sababa kala-bixidda kala-goysyada isku haya lafaha xubinta taranka iyo isku-xirnaanta sacroiliac. Tani, oo lagu daray balaarinta miskahaaga si loogu diyaar garoobo dhalashada cunugaaga, ayaa sababaya socodkaaga caadiga ah inuu isku beddelo waddle. Dhaqdhaqaaqa dhinac-ka-dhaqaaq ee socodkan cusub ayaa gacan ka geysan kara xanuunka sintaada iyo dhabarka hoose.
Ilaha kale ee aan caadiga ahayn ee xanuunka dhabarka u hooseeya wuxuu la xiriiri karaa lakabyadaada laf-dhabarka (ama suufka). Haddii midkood ku murmo inta u dhexeysa laba laf dhabarta, waxay ku dambayn kartaa saxanka ama dareemaha laf-dhabarka oo si xanuun leh loo xoqo. Haddii aad ku xanuunsato fiiq, mindi dhabar xanuun iyo lug xanuun, soo wac dhakhtarkaaga.
Dr. Amy W. Rahl Dr. Kevin Hackett Dr. Joanna Buell Dr. Lauren Sagaria Dr. Alexandra Schueler Dr. Carrie Soder Dr. Ann Marie Wurst Dr. Erika Boothman Goobta Westerville Goobta Dublin Goobta Columbus Cabashooyinka Guud Guudmarka Uurka